Dhuxulow oo ka warbixiyey guulaha xukuumadda muddo todobaad ah – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Dhuxulow oo ka warbixiyey guulaha xukuumadda muddo todobaad ah
28th June 2014 A warsame Af Soomaali 0
Mogadishu, 28 June 2014 – Wasiirka Warfaafinta Mustafa Duhulow oo maanta Muqdisho kula hadlayey warbaahinta ayaa siiyey warbixinta horumarka Dowladda ee usbuucii la soo dhaafay.
Wasiirka ayaa ka hadlayey arrimo ay ka mid yihiin, Diyaarad Caalami ah oo duulimaad isku xiraya Yurub iyo Somalia bilowday, Dowladda oo degmada Doolow ka hirgelinaysa garoon diyaaradeed oo caalami ah, Hirgelinta Mashruuc biyo nadiif ah iyo musqulo lagu gaarsiiyey shacabka degmada Afgoye.
Muqdisho oo laga hirgeliyey duminta dhismayaasha sharci-darada ah si loo soo celiyo bilicdii magaalada, Bandhig Dhaqameedka Soomaaliyeed oo laga hirgeliyey Muqdisho, Dabaaldegga 26ka June, Horumarka Warbaahinta Dalka iyo Fadliga bisha Ramadan.
Wasiirka Warfaafinta oo ka hadlayey Diyaarad Caalami ah oo duulimaad ka bilowday Somalia ayaa yiri “22kii June ayaa diyaarad caalami ah SKYGREECE ayaa soo gaartey Muqdisho oo bilowday duulimaad isku xira dalaka Yurub iyo Somalia. Diyaaradan ayaa keentay dad gaaraya 200 oo ka mid ah Qurbojoogta Soomaaliyeed oo diyaaradda ka soo raacay Stockholm”.
“Diyaaraddan SKYGREECE ayaa fursad qaali ah siin doonta Qurbojoogta Soomaaliyeed inay magaalooyinka Yurub si toos ah uga soo baxaan oo soo gaaran Somalia. Tallaabadan ayaa ah mid kaalin fiican ka qaadaneysa koboca dhaqaalaha, isla markaana isku xireysa Yurub iyo Somalia. Diyaaradan ayaa ah tii 3aad oo diyaarad Caalami ah oo u fududeyneysa Soomaalida inay helaan adeeg diyaaradeed oo caalami ah. Horey waxaa dalka uga howlgali jirey diyaaradaha Turkish Airlines iyo Uganda Air.” Ayuu sidoo kale yiri wasiir Dhuxulow.
Wasiirka oo ka hadlayey Hirgelinta Garoonka Diyaaraadaha ee Dolow ayaa yiri “Wafdi uu hoggaaminayo Wasiir Ku Xigeenka Wasaarada Gaadiidka iyo Duulista Hawada oo ay la socdeen xildhibaano ayaa degmada Dolow ee gobolka Gedo gaaray si halkaas looga hirgaliyo garoon diyaaradeed oo u adeegi doono dadka deegaanka isla markaana isku xir fiican u noqon doona bulshada Soomaaliyeed ee gobolada dalka. Sidoo kale Maamulka Degmada, mas’uuliyiin katirsan Maamulka KMG ah ee Jubba, saraakiil ciidan iyo dadweyne aad u fara badan ayaa halkaas ku soo dhoweeyey. Wafdiga ayaa kormeer iyo qiimeyn ku sameeyey garoonka. Garoonkan ayaa ka qeybqaadan doona kobcinta dhaqaalaha dalka.”
Wasiirka oo ka hadlayey Mashruuc biyo nadiif ah oo laga hirgeliyay Afgoye ayaa yiri “24kii June ayaa Wasaaradda Tamarta iyo Gobolka Banadir ay soo bandhigeen Mashruuc biyo nadiif ah iyo musqulo lagu gaarsiinayey 28 tuulo ee ka tirsan degmada Afgoye si bulshada Soomaaliyeed ay u helaan fursad ay kor ugu qaadaan nadaafadda. Mashruucan ayaa qeyb ka ah qorshaha dowladda ee gaarsiinta adeegyada aasaasiga ah ee bulshada, Dowladdana waxaa ka go’an sidii shacabka Soomaaliyeed ay u heli lahaayeen adeegyada bulshada isla markaasna la gaarsiin doono adeegyada noocan oo kale ah dhammaan dalka oo dhan, bacdamaa mashaariicda noocan oo kale ah ay kaalin mug leh ka qaadanayaan horumarka dalka.”
Wasiirka oo ka hadlayey Bandhig Dhaqameedka Soomaaliyeed ayaa yiri “22kii June 2014 ayey Wasaaradda Warfaafinta dib u yagleeshay Bandhig Dhaqameedka Soomaaliyeed oo lagu qabtay Muqdisho. Dad gaaraya 1500 ayaa ka soo qeybgalay xafladda oo Soomaalida inteeda kale ay si toos ah uga daawanayeen Telefishanada Soomaaliyeed iyo raadiyeyaasha. Tani waxey aheyd waqtiyada ugu fiican taariikhda Soomaaliyeed. Xafladan Bandhig Dhaqameedka ayaa si qurux badan u dhacday oo lagu soo bandhigay quruxda dhaqanka oo isagu jirey heeso, cayaaro, gabayo, riwaayado iyo weliba iyadoo keydka Raadiyo Muqdisho suugaanta ku keysdsan la soo bandhigay. Xafladan Bandhig Dhaqameedka Soomaaliyeed ayaa waxaa ka qeybgalay dhammaan Soomaalida oo suugaanyahanada magaalooyinka Baydhabo, Beledweyne, Kismayo, Garowe, Hargeisa iyo Muqdisho la soo bandhigay. Ujeedada Bandhig Dhaqameedka Soomaaliyeed ayaa ahaa in xasuustii barisamaadkii dib loo xasuusto, bacdamaa ay Soomaaliya noqoneyso waddan nabad ah in laga hortago falalka guracan ee kooxaha nabad-diidka ah oo caadeystay argagax, dagaal iyo burburin.”
Wasiirka Warfaafinta oo ka hadlayey dabaaldegga 26ka June ayaa yiri “Madaxweynaha Somalia ayaa ka qeybgalay xafladii dabaaldegga 54 guuradii markii Gobolada Waqooyi ay heleen xoriyaddii oo isticmaarka laga saaray goboladdaas 26kii June 1960kii. Ujeedada xafladan ayaa aheyd in la xasuusto dhiigii ay awoowayaasheen u hureen helidda xornimada iyo madax-bannaanida dalka oo calankii ugu horreeyey laga taagay Hargeysa. Dhammaan goboladda dalka iyo dibedahaba waa laga dabaaldegey si loo weyneeyo muhiimadda xoriyadda. Waxaa muhiim ah in Soomaalidu ay dib u jaleecaan taariikhda, oo na tuseysa in dadkii waagaas jirey ay ahaayeen kuwo midnimadooda ka hormariya waxwalba, kuna midoobey in gumeystaha la iska saaro oo Soomaalidu ay is maamusho. Maanta oo Qarnigii 21aad ahna waa inaan taariikhdaas wax ka barannaa oo aan midnimadeena dib u soo ceshanaa.”
Wasiirka Warfaafinta oo ka hadlayey Horumarka Warbaahinta Dalka ayaa yiri “Waxaan aad ugu faraxsanahay in shirkii ugu horreeyey ee Kooxda Taageerta Warbaahinta Soomaaliya inuu 26kii June ka dhaco dalka gudihiisa oo horey uga qabsoomi jirey Nairobi. Kooxdan ayaa ka kooban xubno ka socday waddamada deeq bixiyeyaasha, Hay’adaha Qaramada Midoobey, Hay’adaha Ururada Bulshada Rayidka ee Caalamka, iyo Midowga Yurub, ayaa kulamadooda looga hadlaa sidii loo horumarin lahaa Warbaahinta Soomaaliya. Shirkan oo aan ka qeybgalay waxaan warbixin ka siiyey xaalada Warbaahinta Dalka, horumarka Wasaaradda Warfaafinta oo ay ka mid yihiin dhameystirka Istraatjiyada Warbaahinta ee Dowladda, howlgelinta kooxda Warbaahinta ee isku-xirka hay’adaha dowlada, Xeerka Saxaafadda oo loo gudbiyey golaha wasiirada, soo nooleynta Heesaha Hirgalay iyo soo bandhigadda Bandhig Dhaqameedka Soomaaliyeed. Kooxda Taageerta Warbaahinta Soomaaliya ayaa xaqiijiyey sida ay uga go’antahay inay taageerto Warbaahinta Soomaaliyeed.”
Wasiirka Warfaafinta ayaa ugu danbeystii ka hadlay bisha Ramadan oo yiri “Ugu horreyntii, waxaan hambalyo u dirayaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed ee ku aadan bisha barakeysan ee Ramadan. Bisha Ramadan waxey na siineysaa fursado badan oo u baahan inaan ka wada faa’iideysano, sida salaada oo aan badino, wadajirkeena iyo isku imaatinkeena oo aan badino si aan u caawino dadka tabaaleysan, Inaan caalamka tusno in diinteena islaamka ay tahay mid nabad ku saleysan, xasilooni, midnimo, is-tixgelin, is-faham, iyo is-cafis. Waa waqti nooga baahan inaan taariikhda dib u jaleecno, isla markaana aan hiigsano mustaqbal wanaagsan oo ifaya. Hoggaamiyeyaasha Diinta, Waxgaradka, iyo dhammaan qeybaha kala duwan ee bulshada, waxaa saaran mas’uuliyad aad u weyn in bisha barakeysan ee Ramadan aan ku soo ceshano midnimadeena iyo horumarka dalka iyo inaan iska diidno fikradaha qaldan ee argagaxisada ee ku dhisan argargax, dagaal, cabsi iyo dumin. Shacabka tabaaleysan waa inaan u wada gurmanaa.”
Madaxweyne Xasan: Howlgalka Nabad Ku Afur ayay dowladdu diyaarisay
Muqdisho: 20 wasaaradood oo xisaabiyaal loo magacaabay